Maqnaanshaha xisaabtanka hadda ee Cameroon ayaa la ballaariyay 3,4% of GDP ee 2018 ka dib markii 2,5% 2017 - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Maqnaanshaha xisaabtanka hadda ee Cameroon ayaa la ballaariyay 3,4% ee GDP-ka 2018 kadib 2,5% 2017
The deficit account hadda ballaarisey in Cameroon 3,4 2018% of GDP ka dib markii 2,5 2017% ee
(Maalgelinta Cameroon) - Si ka duwan wadamada kale ee gobolka CEMAC ah, Cameroon ayaa u dhaca account hadda ayaa halkii ay ballaarisey in 2018. Sida laga soo xigtay Bank oo ka mid ah States of Central Africa (BEAC) ayaa xogta baahiyay on dheelitirka ganacsiga ah ee gobolka sub ah, hoos u dhaca Cameroon ballaarisey in 3,4% of GDP ee 2018 2,5% in ka dib markii 2017.
Tani waxay sii xumaanaysa ee deficit Cameroon lagu sharaxay by xaqiiqada ah in dheelitirka ganacsiga ee Cameroon, sida ay saadaasha by Beac ah, la kulma qaab xun ee 271,7 billion FCFA ka dhanka ah 2018 117 2017 billion. Cameroon waxaa la socda on this arrimuhu negative by Equatorial Guinea (8,5% of GDP ee 2018 7,1% in ka dib markii 2017).
Marka la barbardhigo Cameroon, hoos u dhaca dhaqaalaha ee hadda account cidhiidhi ah ee Gabon (2,7% of GDP ka dhanka ah 2018 5,0% of GDP sanad ka hor); Chad (4,2% of GDP in ka dib markii 7,1 2017%) iyo Central African Republic (8,0% of GDP ka dib markii 8,5 2017% in). The dheeraad account hadda uu ku soo laabtay Congo (+ 2,6% of GDP ka dhanka ah - in 2,5 2017%).
Laakiin guud ahaan, xisaab dibadda record CEMAC in 2018 hoos u dhac in hoos u dhaca account hadda, deeq rasmi ah waxaa ka mid ah, taas oo ka dhigan tahay in 4,2% of GDP (2 057,9 billion FCFA) ee 2017 in 3,1% of GDP ee 2018 (1 622,5 billion FCFA).
« horumar Tani waxa ay keeni lahaa ka dheeri ah oo Miisaaman ganacsiga ilaa 49,1% ilaa $ 6 436,9 2018 billion iyada oo loo marayo in la kordhiyo dhoofinta (+ 20,4%) ka badan yahay in laga keeno (6,3%) "Ayuu yiri Beac.
Baarlamaanka Cameroon wuxuu aqbalaa sharciga go'aaminta tirada iyo nidaamka gunnooyinka xildhibaannada gobolka
Tunisia: Sannad kaddib marka Sharciga Hirgelinta, 12 marka ugu horeysa ee lagu magacaabo - JeuneAfrique.com